I-china abakhiqizi be-PAM-Anionic Polyacrylamide nabaphakeli | Amanzi ahlanzekile
Coagulant For Paint Inkungu
I-Heavy Metal Susa Umenzeli
Amafutha Ahlukanisa Umenzeli
I-Organic Silicon Defoamer
I-Flocculant Yendle yePetroleum
I-Flocculant Ekhethekile Yezimayini
I-Formaldehyde-Free Fixing Agent
Umenzeli Wokulungisa Umbala
Amakhemikhali We Ro ulwelwesi
Umenzeli Wokuhlobisa Amanzi CW-08
I-PAM-Anionic Polyacrylamide isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi ezimboni kanye nokwelashwa kwendle.
Lo mkhiqizo yi-polymer ephezulu encibilikiswa ngamanzi.Ayincibiliki kuma-solvents amaningi we-organic, ngomsebenzi omuhle we-flocculating, futhi inganciphisa ukumelana kokungqubuzana phakathi kuketshezi. Inezinhlobo ezimbili ezihlukene, i-powder ne-emulsion.
1. Ingasetshenziselwa ukwelapha amanzi angcolile ezimboni kanye namanzi angcolile.
2. Ingasetshenziswa futhi njengesengezo sezinto zodaka emkhakheni kawoyela, ukubhola komhlaba nokwakha isidina.
Ezinye izimboni-imboni kashukela
Ezinye izimboni-imboni eyenza imithi
Eminye imboni yezokwakha izimboni
Umkhakha wokwenza iphepha
Isihlabathi esimhlophe esimhlophe senziwe
Qaphela: Umkhiqizo wethu ungenziwa ngesicelo sakho esikhethekile.
1. Umkhiqizo kufanele ulungiselelwe isisombululo samanzi esingu-0.1% njengokugxila. Kungcono ukusebenzisa amanzi angathathi hlangothi namanzi.
2. Umkhiqizo kufanele uhlakazeke ngokulinganayo emanzini anyakazayo, futhi ukuncibilika kungasheshiswa ngokufudumeza amanzi (ngaphansi kwama-60 ℃).
3. Isilinganiso sokonga kakhulu singanqunywa ngokuya ngesivivinyo sokuqala. Inani le-pH lamanzi azolashwa kufanele lilungiswe ngaphambi kokwelashwa.
Lapho kuhlanjululwa i-emulsion emanzini, kufanele inyakaze ngokushesha ukwenza i-polymer hydrogel ku-emulsion ixhumane ngokwanele namanzi futhi ihlakazeke ngokushesha emanzini. Isikhathi sokuhlakazwa siseduze kwemizuzu engu-3-15.
Iphakheji: 25L, 200L, 1000L isigubhu seplastiki.
Isitoreji: Izinga lokushisa lesitoreji se-emulsion liphakathi ngokuphelele kuka-0-35 ℃. I-emulsion ejwayelekile ingagcinwa izinyanga eziyi-6. Lapho isikhathi sokugcina siside, kuzoba khona ungqimba lwamafutha obekiwe engxenyeni engenhla ye-emulsion futhi kuyinto ejwayelekile. Ngalesi sikhathi, isigaba samafutha kufanele sibuyiselwe ku-emulsion ngokuxakaniseka kwemishini, ukujikeleza kwepompo, noma ukuphazamiseka kwe-nitrogen. Ukusebenza kwe-emulsion ngeke kuthinteke. I-emulsion iqandeka ezingeni lokushisa eliphansi kunamanzi. I-emulsion efriziwe ingasetshenziswa ngemuva kokuncibilika, futhi ukusebenza kwayo ngeke kushintshe kakhulu. Kodwa-ke, kungadingeka ukwengeza okokusebenza okulwa nesigaba emanzini lapho kuhlanjululwa ngamanzi.
Iphakheji: Umkhiqizo oqinile ungapakishwa kuzikhwama zepulasitiki zangaphakathi, futhi uqhubeke nezikhwama ze-polypropylene ezilukiwe ngesikhwama ngasinye esiqukethe i-25Kg.
Isitoreji: Kufanele sivalwe futhi sigcinwe endaweni eyomile nepholile ngaphansi kuka-35 ℃.
Olandelayo: IPAM-Cationic Polyacrylamide